Walaac laga muujiyay awoodda Turkiga ee dejinta qaxootiga - BBC News Somali
Walaac laga muujiyay awoodda Turkiga ee dejinta qaxootiga
Image caption Reer Yuurb wax ay doonayaan in Turkiga uu qaabilo qqaxootiga Giriigga laga soo celinaya.
Maalmo uun ka hor inta uusan dhaqan gelin heshiis ay dhawaan kala saxiixdeen Turkiga iyo Midowga Yurub ayaa waxaa soo baxaya walalac laga muujinaya suurtagalnimada in Turkiga uusan awoodi karin dejinta qaxootiga tirada badan ee gaaraya Giriigga.
Heshiiskaasi ayaa lagu wadaa in uu dhaqan galo maalinta isniinta ah ee soo socota, waxaana heshiiskaasi uu dhigayay in dhammaan qaxootoga codsiyadooda la diiday ama aan wali codsan in magangelyo laga siiyo dalka Giriigga lagu celiyo dalka Turkiga.
Balse weriye ka tirsan BBC-da oo booqday goob ka mid ah goobaha la doonaya in lagu diiwaangeliyo qaxootiga Giriigga laga soo celiyay oo ku taala Turkiga ayaa sheegaya in uu arkay dhul bannaan oo xitaa aysan ka muuqan wax diyaargarow ah.
Sarkaal ka tirsam Midowga Yurub ayaa sheegay in ay ku rajo weyn yihiin in boqolaal qof maalinta isniinta ah laga soo celin doono dalka Giriigga isla markaana la gayn doono goobo loogu tala galay oo ku yaala dalka Turkiga.